Paunotanga mucheka iwe unoda kuita mari, nyanzvi dzichakuudza kuti uwedzere yako fungisisa pane zvinoita kuti uwane mari uye siya zvese zvimwe kunze kwebhuku. Iwe unoziva zvakakosha kuti uvharire yakatarwa misoro mune yako niche kuitira kuti uite mari kubva kushambadzira uye yekutsvaga traffic, asi iwe zvakare unoda uye unofanirwa kuvhara misoro iyo yakasarudzika pane yako chiratidzo.
4 TL; DR: Vijf afhaalrestaurants
Taura somuenzaniso kuti cheki yako yose inopikisana pfungwa dzakawanda mune imwe niche nokuti unotenda kuti iwe unopa chimwe chinhu chakanaka-ungaita sei mari pane chimwe chinhu chinobvunza chimiro cheo kana data yako yose inzauya kano?
Saka kana iwe usati watanga bloggen kungoita imwe mari kubva kuAdense traffic, chinyorwa ichi chinokutungamira kuti uite mari yako blog. uye kukura marimi ako.
Hazviiti, hazvo? Rudyi! Semuenzaniso, ndine bhajiro mukupa simba webmasters nevatengesi nekupikisana neGoogle-inogamuchirwa SEO chero ipi zvayo inonzwisisika – uye iwe unoziva, izvi hazvisi zvakakwana zvachose, kunyange zvazvo bhuti beka rijka.
Ichokwadi, bhujandi yangu haisi iyo yakanaka yekubudisa mashoko kune webmasters vanoedza kuita kuti Google ifare kana kushandiswa chete "nzira dzakagamuchirwa" dzekuwedzera bhuti yebhugi.
semantische voetafdrukken uye kubatanidza izvi kutsvaga kwehutano ndicho chiyiko chaicho chekugadzira mabhizimusi mari. Iwe unofanirwa kuve nechokwadi chokuti wakashandisa rel = auteur uye rel = tags muparidzi mukati me HTML yezvigwaro zvako. Izvi zvinokosha pakuvaka zvakadzama zvemashoko ako ezvinyorwa, kunyanya kuburikidza nekushandiswa kwemasangano evanhu, apo vanogadzirisa mabhuku vanogona kuchengetedza hurukuro inoshanda nekubatana kune mamwe mabweuku anawoehoe. "
"Kunzwisisa makumbo ekudzivirira [zvinotonyanya kukosha] kuti uvandudze zvakadzama zvaunofunga zvishoma nezvishoma. Izvo zvakadzama zvinyorwa zvako zvemashoko, zviri nani SERP’s yako ichava. "
Mimwe misoro inogara ichinyoro uye iwe unogona kuvashandisa denga mhemberero refu, asi kana iwe uri kunyora izvo munhu wose ari kunyora, asina mamiriro matsva uye hapana chinotaura nezvekuona kwako, iwe hausi kuisa bhaher.
Muenzaniso: kana iwe uchitanga bhuku pane-unofanira kuva neNYV, iwe UNODA kuvhara yose yeNNYU yaunonzwa vaverengi vanofanira kutenga, asi kana iwe unonyatsoda iyo Nyori munyori kana boka iroro revanyori vemahara Vasina kusununguka vanoparidza paIndaneti vakasununguka, nei uchingotaura Chete pamusoro peavo vanonyanya kutengesa kubva kuAmazon?
Zvaunenge uri kuita pano ndeyokupa vaverengi vako (avo vanoziva kare nezvezvokudya izvozvo) nzira yekubatanidza zvavanenge vaziva kare kana kuti vakanzwa pamusoro pemhinduro dzaunopa, asi izvoodvozvozany zany. Iyi ndiyo imwe nzira yekuita nayo.
Panoruit zviwuni zviviri zvemashoko uye muenzaniso wekukurukurirana kubva pamashoko.
Mijn post op Kingged -Kubatanidza maonero angu kune vateereri vepuratifomu
Sezvaunodzidza chinangwa chako uye uchitaurirana, iwe uchatanga kuona maitiro anoita kuti zvinyatsogutsikana. Iwe unokwanisa kusungira maitiro aya kune musoro waunoda kunyora pamusoro. Basa iri rekare rinotonyanya kukosha kana ukasarudza kuendesa mushanyi kune goeroe, munharaunda yakawanda (semu MOZ) uye iwe unoziva kuti chiratidzo chako hachifarirwi kana kuti chinopesana nemafungiro akawandisa.
Muchokwadi, IWE Hausi kuzoda ‘kupfura’ meseji yako kune nharaunda (uye pamwe kukwezva vakatsamwa zvirevo kana trol), asi shandisa webhusaiti webhusaiti uye izvo zvakanyanya kugoverwa mapoinzi kubva kune mamwe matumwa senzvimbo yekutanga yekuvaka yako.
Kana izvo nezve Facebook zvemashoko kushambadzira semhando inonyanya kushanda yekushambadzira, asi unotenda izvozvo Quora inogadzira chisarudzo chakanaka, ona kuti ndeapi mararamiro ekutengeserana anokurudzira vanhu vari kutaura pamusoro pe Facebook, uye shandisa Icho se haak kuti upe mazano ehuwandu hweComora sezvimwe zvaunoziva zvinouya nezvimwe zvinobatsira, nezvimwewo.
Zvakare, mufananidzo nemukurumbira waunovaka wakakomberedza pachako uye mhando yako haizove yemushambadzi anoda kumanikidza maonero ake pane vamwe, asi imwe anozvipa asi, achisiya danho rekutora kana kusakwira van. Mutsa uye kutaurirana zvinoshanda nzira yakareba kune yako mufananidzo.
Usangoite zvinoitwa nevamwe vese. Iwe unoda kuita mari sebhizinesi, se blogger inotarisa pane yakasarudzika chiratidzo, kuvaka yako yako merk.
Edza kuyera pakati pekuita mari uye kuti usakanganwike. Kazhinji, kuisa mabhenefiti kuri ezvakanyanya kunaka uye kuunza chimwe chinhu chakakosha uye chine musoro kune nyika pane kungoita mari. Slimme yekumaka iri kuisa pamwe izvo zvatova ipapo uye zvaunoda kupa, musanganiswa wakasarudzika yenzvimbo niche uye USP, kuratidza chiratidzo chakasimba chisingaregi mari ichichivhiringidza.